धनगढीमा बायोग्यास प्लान्ट कहिले हुन्छ सञ्चालन ? :: जयपृथ्वी डेली :: JpDaily
धनगढीमा बायोग्यास प्लान्ट कहिले हुन्छ सञ्चालन ?
जयपृथ्वी डेली सोमबार, असार ६, २०७९
धनगढीः बैकल्पिक उर्जा प्रबद्धन केन्द्र र देव ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस सेन्टरबीच सन २०१८ अक्टोबर २९ मा बायोग्यास उच्च उत्पादन उद्योग स्थापनाको सम्झौता भयो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर २ सरस्वतीनगरमा रहेको ३४ कट्ठा उपमहानगरपालिकाको जमिनमा फोहोरबाट उर्जा र जैविक मल उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना गर्न सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताको चार वर्ष हुँदा पनि उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०७६ वैशाख १६ गते ८ महिनाभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न पत्रचार गरे पनि अझै उद्योका लागि आवसश्यक भौतिक संरचनाहरु निर्माणको काम पूरा भएको छैन। देव ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस सेन्टरका सञ्चालक रविनकान्त पन्तले उद्योगमा विद्युज जडानको काम बाँकी रहेको बताए।
उनका अनुसार केही अन्य भौतिक संरचना निर्माणको काम पनि बाँकी छ। ‘माथि अलि जडानको काम बाँकी छ,’ पन्तले भने, ‘बिजुलीको काम बाँकी छ। नगरपालिकाको चुवनाले अलि ढिलो भयो। हामीलाई जग्गाको लालपुर्जाको फोटोकपी पाएको छैनौं। त्यो पाएपछि विद्युतको मिटर जडान हुन्छ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका र उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको देव ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस सेन्टरबीच विद्युत महशुल तिर्ने बिषयमा विवाद देखिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत लाइन जडानका लागि लालपुर्जा मागेको छ। उपमहानगरपालिकाको नाममा रहेको जमिनको लालपुर्जाका आधारमा विद्युत जडान गर्दा उपमहानगरपालिकाले महशुल तिर्नुपर्ने भन्दै लालपुर्जाको प्रतिलिपि नदिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर दीजराज भट्टले बताए। उनले भने, ‘लालपुर्जा नगरपालिकाको नाममा छ। हाम्रो लालपुर्जाबाट बिजुली लियो भने, नगरपालिकाले पैसा तिर्नपर्छ। प्लान्टले नै पैसा तिर्नेगरी कुरा गर्नुपर्ने भयो।’
विश्व बैँकको ८ करोड, देव ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस सेन्टरको चार करोड तथा बाँकी बैँकबाट लागनी गर्ने गरी २० करोडको लगानीमा बायोग्यास उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता भएको हो। दैनिक ३० टन फोहोरबाट ७० सिलिण्डर ग्यास र तीन दशमलव ५ टन जैविक मल उत्पादनको योजना उद्योगको छ। बायोग्यास उद्योग सञ्चालनमा आएपछि २० वर्षसम्म देव ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस सेन्टरले सञ्चालन गर्ने छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले फोहोर उपलब्ध गराउने छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ६, २०७९ ०९:४०